PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: 2017
Palaung villagers flee as Burmese army detains 300...
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းကို လှုပ်ခါခဲ့သည့် ကိုးကန့် ဒေသတိုက်ပွဲများက ပဋိပက္ခ မြင့်မားလာခြင်း၏ အတွေ့ အကြုံသစ်ဟု ဆိုနိုင်ပြီး သိသာသည့် အချက်မှာ မြန်မာ တပ်မတော် တွေ့ကြုံနေရသည့် အခက်အခဲကို လျစ်လျူရှု့ထား၍ မရတော့ ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကဖြစ်ခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၆ရက်နေ့က လက်နက် အပြည့် အစုံ တပ်ဆင် ထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို့က လောက်ကိုင် မြို့ကိုဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာ နာရီပိုင်းအတွင်း လူ ၃၀ခန့် သေဆုံးခဲ့သလို မြောက်ပိုင်း ပိုကျသော စစ်စခန်းများလည်း တပြိုင်နက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြင့် တကျော့ပြန် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ထွက်ပေါ်လာသည်။
တချိန်ထဲမှာ မဟာမိတ် ပလောင်လက်နက်ကိုင်(TNLA) ကလည်း သံလွင်မြစ်အနောက်ခြမ်း လမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်တောက်ကာ စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ပြီး မန္တလေး-မူဆယ် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို ပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
မြန်မာတပ်မတော် အနေဖြင့် အခြေအနေကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစား တိုက်ခိုက်နေရပြီး၊ ဒါဇင်နှင့် ချီကာ ကျဆုံးမှုများ ရှိသလို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့မှလည်း အတည်မပြုနိုင် သည့် အရေအတွက်များ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုးကန့်တိုက်ပွဲများ၌ မြန်မာတပ်မတော်မှ အချက် အချာကျ သည့် တောင် ကုန်းများကို ပြန်လည်သိမ်းယူရန် ၃လခန့် ကြာမြင်ခဲ့သလို ရာနှင့်ချီသေဆုံး ကာ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ယခုတိုက်ပွဲများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုးကန့်တိုက်ပွဲများနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ကွဲပြား ခြားနားသည့် အချက်မှာ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေပင် ဖြစ်သည်။
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့(MNDAA) ၊ ပလောင်(တအာင်း) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ၊ ရခိုင့်တပ်မတော် AA နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တို့ ပါဝင် သည့် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့မှာ အင်အား ၁ သောင်းခန့် ရှိနေပြီး နယ်မြေ လက်လှမ်းမီမှု၊ စစ်ဆင်ရေးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု၊ မြို့ပြဒေသများကို တိုက်ခိုက်ရန် အသင့်ဖြစ်မှုတို့က မကြုံစဖူး မြင့်မားနေသည်။
ထိုမြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့ကို ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလတွင် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး အချက်အခြာကျသည့် မူဆယ်နှင့် သံလွင်အနောက်ခြမ်းမြို့ အများအပြားကို အချိန်ကိုက်တိုက်ခိုက်ပြီး၊ မန္တလေး- မူဆယ် လမ်းမကြီး ယာယီဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော် မမြင်သာသည့် အချက်က မြန်မာ စစ်တပ်၏ တ ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသော သေနင်္ဂဗျူဟာနှင့် စွမ်းရည် အကြပ်အတည်းပင်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်မြေပြင်လက်ဦးမှု ဆုံးရှုံးကာ ကျော်လွှားနိုင်ရန် မစဉ်းစားနိုင်ဘဲ အရည်အချင်းမီ တုန့်ပြန် ရန် ပြင်ဆင်မထားသော စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ် သည်။
မြန်မာစစ်တပ်သည် အဓိကလူမျိုးစုများကို တဖြည်းဖြည်း အင်အားပွန်းပဲ့အောင် တိုက်သောစစ်မှာ သွေးခွဲရေး အပေါ် တွင်အခြေခံပြီး၊ ၎င်း၏အင်အားများကို ရန်သူတဦးထံတွင်အာရုံစိုက် တိုက်ခိုက်ကာ ကျန်သူများကို တရားဝင် နှင့်တရားမဝင် အပစ်ရပ်ရေး စာချုပ်များဖြင့် ကြားနေပြုလုပ်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကိုတိုက်စဉ် KIA နှင့်အပစ်ရပ်ထားပြီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း KIA ကိုတိုက်စဉ် KNU နှင့်အပစ်ရပ်သည်။ ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA ကိုလည်းအပစ်ရပ်ကာ စီးပွားရေး လုပ်စေခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုကဲ့သို့သောခေတ်မှာ ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းက ယင်းသွေးခွဲ ရေး လမ်းစဉ်ကို အပြီးသတ်ရန် ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ ထို့အတွက် UWSA “ဝ” သည် နိုင်ငံရေး အမာခံဖြစ်လာပြီး အင်အားစုငယ် များကို ပိုမိုထောက်ပံ့နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ် လာသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလက UWSA သည် လူမျိုးစု တပ်ဖွဲ့များ ညီလာခံကို ၎င်းတို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွင် ကျင်းပပြီး၊ တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA ကို ဖျက်သိမ်းကာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် တရုတ်တို့ ဦးဆောင် သည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သစ်ဖြင့် အစားထိုးရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာ လူမျိုးစုအုပ်စုများ၏ အမည်မခံသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာသည်။
ဤကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများကြား မြန်မာစစ်တပ်၏ အရှေ့မြောက်ဒေသအပေါ် ထိန်းချုပ်နိုင် စွမ်းမှာ ချိနဲ့လာကာ စစ်တပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြန့်သော အစိတ်အပိုင်းတွင် ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းစေသည်။
ထောက်ပံရေးလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ကြည့်ပါက ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးတွင် လေဆိပ်တခု သာရှိခြင်း၊ အဓိက လမ်းမကြီး ၂ခုမှာ သူပုန်များ မကြာခဏပိတ်ဆို့ခံရခြင်း၊ စစ်သည်နှင့် လက်နက်ကြီးများကို စစ်မျက်နှာအရောက် အကြိမ်ကြိမ် ပို့ဆောင်နေရခြင်းများက အန္တရာယ်ကြီးကာ ငွေကုန်ကြေးကျများသည်။
ထိုပြဿနာကို ကိုးကန့်တွင် အဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်နေရကာ လေဆိပ်မရှိသည့် လောက်ကိုင်သို့ အင်အားဖြည့်ရန် လမ်း မကြီး တခုနှင့် ရဟတ်ယာဉ်များကိုသာ အားကိုးနေရသည်။
စတုရန် ကီလိုမီတာ ၁သောင်းကျော် ကျယ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ အရေးပါသော ကိုးကန့် ဒေသ၌ မြန်မာစစ်တပ်သည် ချောင် ပိတ်မိကာ အောင်မြင်အောင်လည်း မတိုက်နိုင်၊ ဆုတ်ခွာ ၍လည်း မဖြစ်သည့် အခြေအနေဟု ဆိုရမည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် ဒုတိယ စိန်ခေါ်မှုမှာ လူအင်အား ဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ချုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် စစ်တပ် တွင် အင်အား ၃ သိန်းရှိသော်လည်း တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ရှိ သည့် တပ်ဖွဲ့အင်အား ချိနဲ့နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ တပ်ရင်း တရင်းလျှင် ယခင်က စစ်သည်အင်အား ၈၀၀ နီးပါးရှိသော်လည်း ယခုအခါ ၂၀၀ခန့်သာ ရှိသည်။
ထိုတပ်များ၏ တာဝန် ၂ရပ်မှာ အစိုးရထိန်းချုပ်မှုကို ပြရန် နယ်စပ်မြို့များတွင် တပ်စွဲရေး၊ သူပုန်များကို တိုက်ခိုက်ရေး၊ အကြိမ်ကြိမ်သော ထိုးစစ်များကို လျင်မြန်စွာ တုန့်ပြန်ရေး ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုးကန့်တိုက်ပွဲများတွင် ခြေလျင် တပ်များ အသေအပျောက်များပြီး၊ ခွင့်ရက်မရသည့်အတွက် တိုက်ခိုက်နိုင်မှု စွမ်းရည်အကန့်အသတ်ထက် ပိုရှည်ကာ အခြေအနေ ကို တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်ပဲဖြစ်နေသည်။
ထိုသို့ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းနှင့် လူအင်အား ပြဿနာများကြောင့် အကျိုးဆက် ၂ ခု ဖြစ်လာကာ ပထမ အချက်မှာ ထိုးစစ်ဆင် နိုင်မှု ကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လက်နက်ကြီးနှင့် လေကြောင်းခအင်အားအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုလာခြင်းသည်လည်း ဒုတိယ အချက်ဖြစ်လာသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များက စကာ လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်များ၏ အနီးကပ်ပစ်ကူကို ယူလာရပြီး၊ ခေတ်မမှီတော့သည့် တရုတ် လုပ် A-5 နှင့် F-7 လေယာဉ်များကို သုံး၍ တိုက်ရခြင်းက တရုတ်ပိုင်နက်ကို ကျည်ကျရောက်စေပြီး သံတမန်ရေးပြဿနာ ဖြစ်နိုင်သည်ကလည်း အဟန့်အတားဖြစ်နေသည်။
တတိယအချက်မှာကား မြန်မာစစ်တပ်သည် ကြီးမားသော ထောက်လှမ်းရေး စွမ်းရည် အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်နေရ ကာ ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း တပ်ဖွဲ့ဝင် ရာချီသည့် သူပုန်တို့၏ ထိုးစစ်ကို မြန်မာတပ်မတော် အကြိမ်ကြိမ် အငိုက်မိ နေခြင်းက ထိုအချက်ကို ပြနေသည်။
စစ်တပ်သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသတွင် ထောက်လှမ်းရေး စွမ်းရည်ကင်းမဲ့နေကာ ရန်သူက စိတ်ကြိုက်လှုပ်ရှားနေပြီး အစိုးရထိန်းချုပ်ရာ မြို့ များကိုပါ တိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာမီလာတော့မည့် မေလ မိုးကျပါက မြန်မာတပ်မတော် အနေဖြင့် ခဏတာ သက်သာရာရမည်ဖြစ်ရာ ပွင့်လင်းရာသီ မတိုင်မီ နည်းဗျူအဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၏ လက်တွေ့အခြေအနေမှာ စစ်တပ် အနေဖြင့် မကြုံစဖူး ဖိအားပေးခံနေရသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ် ပြီး၊ နိုဝင်ဘာလ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်ပါ ယခုခံစားနေရ သည့် အတွေ့အကြုံသစ်များကို ထပ်မံခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
[Nikkei Asian Review တွင် ဖော်ပြသည့် Anthony Davis ၏ Military under increasing strain in northern Myanmar ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ် ပြီး Anthony Davis သည် ထိုင်းအခြေစိုက် စာရေးဆရာ တဦးဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေး သုတေသနနှင့် ကာကွယ်ရေးစာစောင် Jane’s အတွက် ရေးသားနေသူဖြစ်သည်။]
By ဧရာဝတီ 30 March 2017
မူရင်း Link -
Posted by PNSjapan at 10:25 AM0comments
The Myanmar authorities must immediately release three journalists, who were detained while carrying out their work in conflict-afflicted northern Shan State, Amnesty International said today.
Aye Nai and Pyae Phone Naing, both reporters for the Democratic Voice of Burma (DVB), and Thein Zaw (aka Lawi Weng),areporter for the Irrawaddy newspaper, were arrested along with four other people they were travelling with. At present there is no information as to the identities of the four other detainees.
“These journalists must be immediately and unconditionally released, and allowed to resume their work freely and without fear. Their arrests sendachilling message to Myanmar’s already embattled media,” said James Gomez, Amnesty International’s Director for Southeast Asia and the Pacific.
Amnesty International has learned that the group was arrested by soldiers atamilitary checkpoint at Payargyi village, in northern Shan State’s Namhsan township, at approximately 3:30pm local time. The journalists were in the area to report onadrug burning ceremony to mark today’s International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking.
These journalists must be immediately and unconditionally released, and allowed to resume their work freely and without fear. Their arrests sendachilling message to Myanmar’s already embattled media
A statement posted on Facebook, by the Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces, says the group was arrested for being in contact with the Ta’ang National Liberation Army (TNLA).
The TNLA is one of several ethnic armed groups currently locked inaconflict with the Tatmadaw, Myanmar’s military forces, in northern Myanmar.
The statement threatened to take action against the group “according to the law”. There are fears that the seven people arrested may be charged with the vague and repressive Unlawful Associations Act, often used to arbitrarily arrest and detain people in ethnic and conflict affected areas, both predominantly along Myanmar’s borders.
The space for journalists to do their critically important work is under threat as the authorities continue to invokeaslew of draconian laws to silence, arrest and imprison them and restrict access to areas where the military operates.
“These arrests areacrude attempt to intimidate journalists byamilitary that cannot seem to abide even the faintest criticism. Fearful of any scrutiny of its role in northern Myanmar, where they stand accused of war crimes, the army is doing its best to stop journalists and other observers from accessing these areas,” said James Gomez.
Inareport released earlier this month, Amnesty International documented how civilians from minority ethnic groups in Kachin and northern Shan States are suffering appalling abuses, including possible war crimes, at the hands of the Tatmadaw.
“ဖက်ဒရယ်တစ္ဆေ – ခွဲမထွက်ရ”နဲ့ ရဲထွန်း (သီပေါ)၏ နလဗိန်းတုံးဆန်မှု
“ဖက်ဒရယ်တစ္ဆေ” သည် “ခွဲမထွက်ရ” ဟူသော ဝတ်ရုံသစ်လဲကာ “၂၁ ရာစုပင်လုံ စင်မြင့်”ပေါ်ကနေ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီ။ ပို၍ လူလည်ကျသော အသုံးအနှုန်းကို တမင်တကာရွေးသုံးပုံ ပေါ်ပါတယ်။ “ခွဲမထွက်ရ” ဆိုတာကို လက်မခံ/ငြင်းပယ်ရင် “ခွဲထွက် ရေးသမား/ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှု” ဆိုတဲ့ ချောက်ထဲ တမင်တွန်းချဖို့ အကွက်ချ ကြံစည်ထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်မှာ ဘက်တစ်ဖက်သာဖြစ်ပြီး အခြားဘက်တစ်ဖက်မှာ “ပြည်ထောင်စုက ခွဲမထွက်ဘူး” ဆိုတဲ့ ကတိ၊ အာမခံချက်ကို မပေးဘူးဆိုရင် “ကိုယ်ပိုင်အခြေခံဥပဒေ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင်တို့” မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြပ်ကိုင်မှုဘက် ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဖြင့် စစ်အုပ်စုက ဒီချုပ်အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို အသုံးချ၊ မြှူဆွယ်၊ တောချောက်ခိုင်းပြီး NCA ပိုက်ကွန်ထဲ၊ ထိုမှတဆင့် “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ” ကျုံးထဲ မောင်းသွင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျော့ကွင်း ဒီအခင်းအကျင်း၊ ဒီအကွက်ကို မြင်တဲ့ (UWSP/UWSA) ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ အမှူးပြုတဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များက NCA မဟုတ်တဲ့ အခြားလမ်းကို စင်ပြိုင် တင်လာခြင်းဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို စဉ်းစားတဲ့အခါ လုံးဝ အခြေမခံသင့်တဲ့ (ဖျက်သိမ်းပစ်ရမယ့်) ရပ်တည် ချက် ၃ခု ရှိပါတယ်။
၁။ စစ်အုပ်စုအတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် ၊ အနာဂတ် အကျိုးစီးပွားကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်
၂။ စစ်အုပ်စုက စစ်တပ်ကို တစ်လက်ကိုင်တပ်အဖြစ် ချုပ်ကိုင်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံကို ထာဝစဉ်ဗိုလ်ကျ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရေးဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်
၃။ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ကျင့်သုံးနိုင်ရေးကို ဦးတည်ဇောင်းပေးတဲ့ ရပ်တည်ချက်
ထာဝစဉ် မျက်နှာမူပြီး အစဉ်ရပ်တည်ကိုင်စွဲရမယ့် ဦးတည်ချက် (ဝါ) ရပ်တည်ချက် ၃ခုမှာ
၁။ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများ၏ တန်းတူရေး၊ ညီညွတ်သွေးစည်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဘက်စုံအကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် မျက်နှာမူရေး။
၂။ လက်ရှိပကတိတည်ရှိနေတဲ့ လူမျိုးရေးဖွဲ့တည်မှု၊ နေထိုင်မှုများအပေါ် လက်တွေ့မူတည်ပြီး (သမိုင်းကြောင်း၊ ပထဝီ၊ ပကတိ လူမှုဘဝဖွဲ့တည်မှု အနေအထား) စဉ်းစားဖော်ဆောင်ရေး။
၃။ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပုံစံနဲ့အနှစ်သာရဟာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများရဲ့ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အပြည့်အဝအာမခံနိုင်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဘက်ညီမျှတစေပြီး အစဉ် ဦးတည်သွားစေနိုင်ရေး။
အထက်ပါ ဦးတည်ချက်(ဝါ) ရပ်တည်ချက်များကနေ အစချီပြီး အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို စဉ်းစားကြံဆရပါလိမ့်မယ်။ သို့မှသာ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူများဘုံအကျိုးစီးပွားကို တကယ်တမ်း လက်တွေ့ဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆ မျှော် လင့်ပါတယ်။
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ”၊ “တပ်မတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေမူ ၆ ချက် ”၊ “(NCA) စာချုပ် ဘောင်” တို့ကို အသေရပ်တည်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်။ သို့တည်းမဟုတ် အခြေခံအဖြစ် အတင်းအကြပ် ထည့်သွင်းရမယ်လို့ဆို ရင် ဘယ်ခရီးမှ ပေါက်ရောက်နိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တန်းတူတဲ့၊ သွေးစည်းညီညွတ်တဲ့ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ် ပြည် ထောင်စုကို သွေးရိုးသားရိုး ဦးတည်ရိုး မှန်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက် ၃ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား စွန့်လွှတ်ရဲဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီအခြေခံအချက် ၃ချက်ကို အသေကိုင်စွဲထားနေသမျှ အခြားတစ်ဖက်ကနေ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး သွေး ရိုးသားရိုး ပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေကို “ပြည်ထောင်စုဖြိုခွဲသူတွေ၊ ခွဲထွက်ရေးသမားတွေအဖြစ်” အဆိုးမြင်ပြီး သုံးသပ် အကဲဖြတ် နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်မှန်စိမ်းနဲ့တူတဲ့ အဆိုပါ အခြေခံအချက် ၃ချက် (၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ၊ တပ်မတော်၏ ငြိမ်း ချမ်းရေးမူ ၆ချက်၊ (NCA)စာချုပ်ဘောင်)ကို စွန့်ပယ်ဖို့ သို့တည်းမဟုတ် ဖက်ဒရယ်အရေး ဦးတည်ဆွေးနွေးတဲ့အခါ အစည်းအ ဝေးခမ်းမ အပြင်ဘက်မှာ ခေတ္တခဏဖြစ်ဖြစ် ထားပစ်ခဲ့ကြဖို့ မုချ လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ တမျိူးသားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးအရာညီလာခံဆိုတာမှာ အသေးစိတ်တွေ ဆွေးနွေးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မူ သဘောဆောင်တဲ့ ကျယ်ပြန့်လွှမ်းခြုံတဲ့အချက်တွေကိုသာ “အားလုံး”အကြားမှာ အကျေအလည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီလို မူတွေ၊ ကျယ်ပြန့်လွှမ်းခြုံနိုင်ပြီး အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း သဘောတူတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာ လမ်းညွန် ချက်တွေအပေါ်မှာ ဥပဒေကိစ္စအသေးစိတ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်သူတွေက လိုအပ်သလို အသေး စိတ် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးကနေ ဆုံးဖြတ်၊ သတ်မှတ်၊ ချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ မူတွေ၊ လမ်းညွန်တွေနဲ့ ကိုက်ညီ၏၊ မညီ၏ဆိုတာကိုသာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များက အသေအချာ စစ်ဆေးကြည့်ရှုကြရ မှာဖြစ်ပြီး မကိုက်ညီပါက လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်တည့်မတ်ဖြည့်စွက် ညွန်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးဖက်တဦး၊ ဆွေးနွေးဖက်ပါတီ၊ ဆွေးနွေးဖက်အစုအဖွဲ့တစ်ခုက တင်ပြနေတာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် လေ့လာနား ထောင် ဆန်းစစ်ခြင်းမပြုသေးဘဲ “ပြည်ထောင်စုဖြိုခွဲရေးသမား၊ ခွဲထွက်ရေးသမား” လို့ အလွယ်တကူ တံဆိပ်မကပ်သင့်ပါဘူး။ ထို့အပြင် သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမျိုးစုံကနေပြီးတော့ “ခွဲထွက်ရေးအန္တရာယ်” ဆိုပြီး ဆေးလိပ်မီးပွားလေး ကျ တာလောက်ကို ဟီရိုးရှီးမားမြို့ပေါ် အနုမြူဗုံးကြဲချလိုက်သလိုမျိုး ရေးကြီးခွင်ကျယ် မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုး၊ ဒီလိုအာဘော်မျိုး “ကြေးမုံသတင်းစာ” ကနေ စဖြန့်နေတာ သတိပြုမိပါတယ်။
ရဲထွန်း(သီပေါ) ရဲ့ “ဆိုဗီယက်ခေတ် လူမျိုးအခြေပြု ဖက်ဒရယ်နှင့် ပြိုကွဲမှုအန္တရာယ်” —ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်းပါးတွေ ဆက်တိုက် ဖော်ပြလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ “သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ အာ ဘော်ပါလို့ မည်သို့ပင်ဆိုနေစေကာမူ” အစိုးရပိုင်သတင်းစာက အရေးတယူဖော်ပြတယ်ဆိုတာ အစိုးရအာဘော်နဲ့နီးစပ်လို့၊ အစိုး ရက သဘောတူ၊ အစိုးရက နှစ်ခြိုက်လို့ဖော်ပြတာပဲ မဟုတ်ပါလား။
ရဲထွန်း(သီပေါ)ရဲ့ဆောင်းပါးအာဘော်က “လူမျိုးအခြေပြုဖက်ဒရယ်”ကို “ပြိုကွဲမှုအန္တရာယ်”နဲ့ ခြောက်လှန့်ထားတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲထွန်း(သီပေါ)က ကြိုးစားပမ်းစား ဝီကီအားကိုးနဲ့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲရတာကို လူမျိုးစုတွေခွဲထွက် တာကြောင့်လိုလို အရှက်မဲ့စွာဆိုထားလေရဲ့။ တန်းရှိတဲ့လေ့လာသူ၊ လေ့လာရေးသမားက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ဘာကြောင့် ပြိုကွဲရတယ်ဆိုတာ ချက်ခနဲသိပေမယ့် ရဲထွန်း(သီပေါ)မှာ ဖက်ဒရယ်ပြိုကွဲမှု အစိမ်းသရဲပူးဝင်နေလေတော့ ဒါကို မြင်ရှာပုံ မရ ဘူး။ မြင်သော်လည်း ကျားကျား မီးယပ်လုပ်ချင်ပုံ ပေါ်နေပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် ရဲထွန်း(သီပေါ) နှပ်ကြောင်းပေးထားတဲ့အချက်က “ခွဲထွက်ခွင့်”ကို အခြေခံဥပဒေထဲမှာ တရားဝင်ထည့်သွင်း ရေးဆွဲခဲ့လို့၊ လီနင်နောက်ပိုင်းခေတ်လူတွေက “ခွဲထွက်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်”ကို စောစောစီးစီး ဘာကြောင့် မပြင်ဆင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အချက် ဖြစ်တယ်။
ဒီအချက်က တကယ်တော့ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း ၁၀ (ခွဲထွက်နိုင်သောအခွင့်အရေး – Right of Secession) ပုဒ်မ ၂၀၁ နဲ့ ၂၀၂ ကို ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ ရဲထွန်း (သီပေါ) က ခွဲထွက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း”ကို အပြစ်ပုံချချင်လို့ “လီနင်” ကနေ အစချီနေတာဖြစ်တယ်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုက ၁၉၂၂ မှာ ခွဲထွက်ခွင့်ရှိတာကို ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ရေးသားပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ၁၉၂၄၊ ၁၉၃၆၊ ၁၉၇၇ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ဆက်လက်ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာကို ရဲထွန်း(သီပေါ)အနေနဲ့ မကြည်မဖြူ မလိုမုန်းထားဖြစ်နေတာက မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်အောင် ထင်ရှားပါတယ်။
ဒီအခါမှာ ရဲထွန်း(သီပေါ) ဆက်လက် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ သူ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ သူ့သဘောထား ပွင့်ကျသွားစေတဲ့ မေးခွန်း ကို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ထုတ်ဖော်မေးတဲ့ ဘဝကို သက်ဆင်းကျရောက်သွားတော့တာပါပဲ။
သူ့ရဲ့အလွန် နလဗိန်းတုန်းဆန်ပြီး မိုက်မဲလှတဲ့မေးခွန်းကတော့ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေပါ ခွဲထွက်ခွင့်နှင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပွဲအပေါ် မည်သို့မှတ်ချက်ပေးလိုပါသလဲ”တဲ့။
“မိုက်မဲတဲ့ မေးခွန်းအတွက် လိမ္မာတဲ့အဖြေပေးရန် မလို” ဆိုတဲ့ မောင်ကောင်းထိုက်(နှီးပဒေါ)ရဲ့ စကားလေးနဲ့ နိဂုံးချုပ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရဲထွန်း(သီပေါ)ကား သူ၏ မေးခွန်းဖြင့် သူ၏ နဗိန်းတုံးဆန်မှုကို အတိအလင်း ဖော်ပြခဲ့လေပြီ။
အစိုးရပိုင် “ကြေးမုံသတင်းစာ”သည်လည်း ရဲထွန်း(သီပေါ)၏ နလုံးဗိန်းတုံးအမြင်ကို စက်တင် ပုံနှိပ် ဖော်ပြ ဖြန့်ဝေခဲ့လေပြီတ ကား။
( ​ကေအိုင်​စီ )
Posted by PNSjapan at 6:51 PM0comments
နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာမှ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ ရက်စက်ရုတ်မာမှုသတင်း
Myanmar soldiers' torture caught on video
Scenes from the video clearly show Tatmadaw (Myanmar army) men kicking, beating and intimidating villagers. (Twitter/Fortify Rights)
Human rights advocates are calling on Myanmar’s government to investigateavideo that appears to show soldiers kicking, beating and threatening to kill six captives.
The video, which seems to show soldiers repeatedly kicking the men in the head as they interrogate them, surfaced on Facebook over the weekend. Based on the speakers’ accents, the military uniforms and the place names mentioned, it appears to have been shot in Shan state, where rebels are fighting government forces.
The savage attack was shown on an 86-second video apparently taken onaphone.
A Fortify Rights Twitter post showing the video said, "#Myanmar Army soldiers savagely beat ethnic men, authorities should urgently investigate"
Before you click: This video shows several attacks of severe brutality. Viewer discretion is advised.
"The government should investigate, and they should hold the perpetrators accountable," Matthew Smith, chief executive of Fortify Rights, an advocacy group based in Thailand, said on Tuesday. "This is one of the rare cases where we can see the soldiers committing torture in one of the conflict zones. It is certainly incumbent on the authorities to take action."
Spokesmen for the Myanmar Ministry of Defence and for Aung San Suu Kyi, the de facto leader of Myanmar's government, said Tuesday that they were too busy to answer questions about the video.
The Myanmar military, known as the Tatmadaw, has been battling ethnic rebels for decades in many parts of the country.
Suu Kyi has made establishing peaceahigh priority since she took office last year, but in many areas the fighting has only increased. A peace conference that she convened inabid to achieve national reconciliation ended this weekend without substantial progress.
Suu Kyi has no authority over the armed forces under the Constitution, drafted by the military, which ruled the country outright for decades.
The video is the second in recent months that appears to show security forces in Myanmar abusing captives. A video that surfaced in December seemed to depict border police officers in the state of Rakhine beating two unarmed men, members of the persecuted Rohingya minority. That video led to the arrest of four officers.
Smith said he believed the episode captured in the latest video had occurred recently, and he expressed concern about the welfare of the captives.
One officer, apparently in command, questions the men about weapons. He hits one in the face withahelmet, shouting, "Where are the guns?"
"Even though you don't haveagun, you are still part of the resistance," the officer says, according toatranslation provided by Fortify Rights. "If you say you don't have anything, I'm going to break all your teeth."
The interrogators kick and strike the men and threaten to kill them if they do not comply. "I will cut your throat and kill you," one soldier says.
At one point, the officer tellsadetainee that if they find guns, he will cut out his tongue. At another point, he wavesamachete and threatens to cutacaptive's throat.
Just before the video ends, he warns, "We won't set you free."
Copy from - http://m.bangkokpost.com/news/world/1259318/myanmar-soldiers-torture-caught-on-video?refer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F
Posted by PNSjapan at 7:56 PM0comments
ဓါးကိုင်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ပြီး ညှင်းပန်း နှိပ်စက်နေ
ရှမ်းပြည်နယ်က ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် က နမ့်ဖက်ကာရွာသားတွေကို အစိုးရစစ်တပ်က ရိုက်နှက် နှိပ်စက်တယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဖိုင် တခုကို Fortify Rights ဖော်တီဖိုင်း ရိုက် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေက အမြန်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ ဒီအဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ ဗီဒီယို ဖိုင် က အရှည် အားဖြင့် ၁၇ မိနစ်ကျော် ရှိပြီး စစ်သား တွေက ရွာသားတွေကို ရိုက်နှက် နေတာတွေ၊ စစ်ဉီးထုပ် အမာစား နဲ့ ရိုက်နှက် နေတာတွေ၊ ဓါးကိုင်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ပြီး ညှင်းပန်း နှိပ်စက် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်သားတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ကို ကြည့်ချင်း အားဖြင့် လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင် နေတဲ့ စစ်သား တွေ ဖြစ်ပြီး ကွတ်ခိုင် မြို့နယ်မှာ အခြေ စိုက်တဲ့ တပ်ရင်း ၈၈ ရဲ့ အမှတ် တံဆိပ်တွေကို တပ်ဆင် ထားတယ်လို့ Fortify Rights အဖွဲ့ ဘက်က ပြောပါတယ်။
သူတို့ ကိုင်ဆောင်ထား တဲ့ လက်နက်တွေ ကလည်း လက်ရှိ စစ်တပ်မှာ သုံးစွဲ နေတဲ့ လက်နက်တွေ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု က ပုံမှား ရိုက်တာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ရုပ်သံဖိုင်ထဲက စစ်သားတွေရဲ့ မြန်မာ စကား ပီပီသသ ပြောကြားမှု ကြောင့် ဒါကလည်း စစ်တပ် ကို အသွင် သဏ္ဍန်ယူ ပုံမှား ရိုက် လုပ်ကြံတာ မျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ရွာသားတွေကို အစိုးရ စစ်တပ် က ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထားပြီး ဘယ်နေရာမှာ ထိန်းသိမ်း ထားတယ် ဆိုတာကတော့ လောလောဆယ်မှာ မသိရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကို ကြည့်ချင်း အားဖြင့် စစ်တပ် က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သုံးသပ်လို့ ရတယ်လို့ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူ နစ်ကီဒိုင်းမွန်း ပြောပါတယ်။
စွပ်စွဲလိုက်ပြီး အခုလို ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ဆက်လက် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့လိုပြီး တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဘက်ကရော အစိုးရစစ်တပ်ဘက်ကပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုမယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဥပမာ – တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတွင်းနစ်သွားပြီးတော့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနုိုင်ငံများစာရင်းဝင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ လူမှုစီးပွားဘ၀ ချွတ်ခြုံကျမှုတွေဟာ ဒီနေ့အချိန်ထိ နာလံမထူ ခေါင်းမထောင်နိုင်သေးပါဘူး။ အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက် မှာလည်း ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံပြဿနာဟာ နုိုင်ငံရေးပြဿနာလို့ သိသော်ငြားလည်း နုိုင်ငံရေးနည်းအရ တန်းတူရည်တူ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာခြင်းထက် အင်အားသုံးပြီး စစ်ရေးနည်းနဲ့သာ အဖြေရှာခဲ့ကြရာမှာ ဒီနေ့အချိန်ထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကို ပုံဖော်ထုဆစ်ကြရာမှာ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တွေကို အခြေခံပြီး ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း မပြုလုပ်နုိုင်ကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဌာနချုပ် လုိုင်ဇာမြို့မှာ တစ်နုိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) ကို ဖွဲ့စည်းပြီး တိုင်းပြည်အနှံ့ သေနတ်သံတွေ ရပ်စဲဖို့ တစ်နုိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို (၂၀၁၃ – ၂၀၁၅) ခုနှစ် ကာလတွေမှာ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
(ဆောင်းပါးရှင် မောင်အဉ္စနမှာ နယ်စပ်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်)ည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး (၂)